गुल्मीमा कफी खेतीमा सिन्दुरे रोग देखा पर्यो
सागर भण्डारी,कार्तिक २२ गुल्मी ।
गुल्मीमा लगाईएको कफी खेतीमा सिन्दुरे रोग देखा परेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगाईएकौ कफी खेतीमा सक्रांमक मानिएको सिन्दुरे रोग देखा परेको हो ।
केहो सिन्दुरे रोग ?
यो अराबीका कफीमा लाग्ने खतरनाक ढुसी रोग हो । यसले ७० प्रतिशतसम्म बाली नोक्सान गर्न सक्दछ । यो रोग वर्षैभरी लाग्न सक्ने भएतापनि तापक्रम र आद्रता बढी हुने समय साउनदेखि कार्तिकसम्म यसको प्रकोप बढी हुने गर्दछ ।
रोगका लक्षण ?
पातको तल्लो सतहमा सुन्तला रगंका पहेला दानादार थोप्ला देखिन्छन् । थोप्लाहरु बढ्दै गई एक आपसमा जोडिन पनि सक्छन् । रोगको प्रकोप बढ्दै गएपछि सबै पातहरु झर्दछन्,हाँगाहरु रित्ता हुन्छन् र बोट सुक्छ ।
फूलफुल्नु पूर्व काँटछाँट गर्ने । बढी छहारी भएमा हटाउने । यदी रोग लागेको छ भने ठुलाबोट र पुरानाबोटहरुमा १ प्रतिशतको बोडो मिश्रण बनाई तुरुन्तै पातको तल्लो तथा माथिल्लो भाग पर्याप्त भिज्ने गरी छर्ने । त्यस्तै नर्सरी र साना बोटहरुमा ०.५ प्रतिशत बोडो मिश्रण बनाई छर्ने गर्नुपर्दछ ।